Mizaha an’izao tontolo izao
“Fa ankehitriny isika mizaha ao amin’ny fitaratra ka tsy mahita marina; fa rahatrizay dia mifanatrika; ankehitriny sombintsombiny no fantatrao; fa rahatrizay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy.” 1 Kôr. 13:12
Mibanjina ny endrik’Andriamanitra, izay voataratra eny amin’ny asan’ny natiora sy ny fiasany miaraka amin’ny olombelona, tahaka ny eo amin’ny fitaratra isika; fa amin’izay fotoana izay dia ho hitantsika mivantana Izy, ary tsy misy voaly maizina hanakona intsony (...)
Ho hita any ny tena fiasa marina sy ny tena hamamin’ny fitiavana sy ny fiantrana izay Andriamanitra, Izy tenany mihitsy no namboly azy tao amin’ny fanahy. Ny fifandraisana madio amin’ireo voary masina, ny firindran’ny fiainana ara-tsôsialy miaraka amin’ireo anjely voatahy sy ireo olona nahatoky tamin’ny fotoana rehetra, izay nanasa ny akanjony ary namotsy izany tao amin’ny ran’ny Zanak’ondry, ilay fifandraisana masina izay mampiray “ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany” – izany rehetra izany dia manampy amin’ny fanorenana ny fifalian’ny voaavotra.
Rehefa tonga any, dia handinika ireo zava-mahagaga raketin’ny herin’ny famoronana sy ny misiterin’ny fitiavam-pamonjena ireo saina tsy mety maty, ary tsy ho sasatra na oviana na oviana izy ireo ny amin’ny fifaliana be ateraki’izany. Tsy hisy fahavalo ratsy fanahy, sy mpamitaka intsony any.
Misokatra malalaka mba hianaran’ireo voaavotr’Andriamanitra ny harena rehetra an’izao tontolo izao. Tsy misy intsony ny sakantsakan’ny fahafatesana, fa hikopaka ny elany tsy mety reraka izy ireo ary handeha hanidina hitety tontolo any amin’ny toerana lavitra- tontolo izay nalahelo mafy tokoa rehefa nahita ny zavatra ratsy nanjo ny olombelona, kanefa nihira hiram-pifaliana rehefa nahare ny vaovao mahafaly ny amin’ny namonjena ireo fanahy. Mijery amin’ny fomba fijery tsy misy kihanina ny voninahitry ny famoronana izy ireo. Ny Masoandro, ny kintana ary ireo planeta hafa ao anatin’izao tontolo izao, ireo rehetra ireo araka ny efa nibaikon’Andriamanitra azy, dia hanodidina ny seza fiandrianan’Andriamanitra.
Ary arakaraka ny hanedehanan’ireo taona maro mifandimby mandrakizay , no vao mainka hitombo bebe kokoa hatrany hatrany ny amin’ny voninahitra lehiben’ny fanambarana an’Andriamanitra sy Kristy. Tahaka ny fitomboan’ny fahalalana, dia hitombo tahaka izany ihany koa ny fitiavana, ny fanetren-tena sy fanajana, ary ny fifaliana. Arakaraka ny hianaran’ny olombelona ny momba an’Andriamanitra, no vao mainka hitombo be ny figagany sy ny fitiavany ny Toetrany. Rehefa sokafan’i Jesosy eo anoloan’izy ireo ny haren’ny fanavotany sy ny zava-bitany mahagaga tamin’ny fifanandrinany tamin’i Satana, amin’izay fotoana izay dia hibitabitaka ho feno hafanana hanolo-tena kokoa ny fon’ireo voaavotra, ary amin’ny hafaliam-po lehibe no hitendreny ireo lokanga volamenany; aryan’alinalina sy an’arivorivo ireo feo hikambana hiaraka hiredona ny hiram-pideràna.